It is me. Ko Niknayman.: အတ္တဟိအတ္တနော.နာထော၊ မိမိကိုယ်သာကိုးစား၊ လွတ်မြောက်ရေးကြိုးစားကြ
အတ္တဟိအတ္တနော.နာထော၊ မိမိကိုယ်သာကိုးစား၊ လွတ်မြောက်ရေးကြိုးစားကြ
၀ါရင့်သတင်းစာဆရာကြီး လူထုစိန်ဝင်း မှ ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူများသို့ ပန်ကြားချက်
Posted by အာဇာနည် at 2:36 AM